Shina: Mandroaka ireo tsy an’asa ao Shenzhen · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Mey 2018 3:51 GMT
Nandritra ny fihaonana niaraka tamin'ny Filankevitra Mpanolo-tsaina Ara-politika any Hong Kong-Macau, nilaza ny ben'ny tanàna lefitr'i Shenzhen, Li Ming, sady lehiben'ny biraon'ny polisy fa raha afaka manana lalàna fototra i Shenzhen, dia hametra ny isan'ireo mpiasa mpifindra monina tsy an'asa nandritra ny telo volana mahery mba tsy hanofa trano, raha ny marina dia mangataka azy ireo hiala ny tanàna. Notehafan'ny filankevitra ny tolo-kevitra, araka ny tatitry ny Southern Daily.
Tsy mankasitraka ny soso-kevitr'i Li ny valinteny an-tserasera. Bilaogera marobe no nahita fa fandikàna ny zo fototry ny mpiasa mpifindra monina izany. Ny hafa kosa niantso izany fa tsy rariny ho an'ny vahoaka mpifindra monina manontolo. Nilaza ilay bilaogera Hai Ta fa manasokajy ireo mpifindra monina tsy an'asa ho jiolahy ny fepetra tahaka izany.
Milaza ilay bilaogera Zhuben-Dingchong fa mametraka olana momba ny lalàna tokoa ny soso-kevitra:
Bilaogera Chisun nanoratra fa manan-jo hanofa trano izay safidiny ny olom-pirenena Shenzhen.
Li Zheqi, mpanolotsaina lehiben'ny orinasa malaza momba ny varotra, nanoratra tamin'ny blaoginy fa na dia mitondra olana ao an-tanàna aza ireo mpiasa mpifindra monina, dia mbola olom-pirenena mendrika hanana zo izy ireo.